Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiombonana : pao-droa ny hevitra fehezina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiombonana : pao-droa ny hevitra fehezina
Na fananana iraisana, na fifampihavanana aorian’ny tsy fitovian-kevitra nampisaraka, tranga roa samy voafehin’ny voambolana hoe fiombonana. Ao amin’ny fitsipiky ny demôkrasia izay mametraka fifanekena mikasika ny fanaovana ny hevitry ny maro an’isa ho hevitra lany ifaneken’ny rehetra, dia manao pao-droa ny fifidianana. Fiombonan-kevitra manodidina ny safidin’ny maro an’isa, fiombonan’ny rehetra izany hoe fanajanonana ny disadisa nateraky ny fifaninanana.
Raha vita izao ny fifidianana, izay lany eo iombonana ho filohan’ny rehetra. Hifampiombona ka ho tapitra hatreo koa ny firafesana sy ny mety ho fifankahalana. Tanindrazana iombonana, fametrahana ny fandrosoana ho tanjona iombonana ihany koa. Ny ezaka amin’izany mbola ifampizarana koa araky ny andraikitra tandrify ny tsirairay. Eo ny fitondrana, eo anilany ny fanoherana izay samy manana ny adidiny nefa mifameno noho ny fikatsahana tombontsoa iraisana. Ny tombontsoan’ny firenena iombonana arak’izay voalaza tany aloha. Noho izany, rehefa avy nandinika ny fitarainana napetraka teo aminy ny HCC ka nanapaka ny hevitra farany
amin’ny fanambarana ny fandresen’ny iray amin’ny mpifaninana izay atsangana sy omena hasina ho Filohan’ny Firenena dia meloka izay manda an’izany.
Eo ihany ny fahamelohana eo anoloanan’ny lalàna, fa ny tena tsy ampy fahamendrehana ny fanotana eo anoloan’ny tany sy ny vahoaka noho ny fanaovana sakana ho an’ny fampandrosoana, hetsika mitory lainga noho ny fanipahan’izany teny naloa-bava nanambara fitiavan-tanindrazana. Hafa ny fanaovana fanoherana tsy mitovy amin’ny fitsipahana rafitra repoblikana anivo-na tontolo demôkratika. Manan-jo ny olom-pirenena tsirairay amin’ny fanehoana tsikera mikasika ny fitantanana mivilambilana araky ny fahitany azy, mahefa ambonin’izany ireo tompon’andraikitra pôlitika ka afaka mampiasa fomba fanoherana ao anatin’ny sehatra voafaritry ny lalàna ho fanaovana ny hetsika mifanandrify amin’izany.
Tsy noho ny tenin’olona iray, fa araky ny lalàmpanorenena mifehy ny Filohan’ny Repoblika voafidy dia andry iray eo amin’ny Fifehezana, mahefa arak’izay voafaritry ny lalàna mandritran’ny dimy taona eto amin’ny tany sy fanjakana. Izay ny didy, izay ny rafitra nifanekena itantanana ny firenena.
Noho izany, izay lany eo araky ny didy ho avoakan’ny HCC dia Filoha iombonana, ary ny fandraisany andrikitra dia manambara ny famaranan’ny fifaninanana. Fiombonana amin’ny fanompoana tanindrazana ao anatin’ny fizarana toeran’adidy vaovao izay samy manana ny hasiny no mitaky fifanajana mifamaly arak’izay.